काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको शनिबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी बैठकले पूर्वनिर्धारित १४ औं महाधिवेशनको मिती पछि सार्ने निर्णय गरेको छ । काँग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुषालले भदौं ७ देखि १० गतेसम्म १४ औं महाधिवेशनको मिती तय भएकोमा आजको पदाधिकारी बैठकले आगामी भदौं १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुुभयो । सचेतक भुषालले १४ औं […]
June 12, 2021 N88LeaveaComment on गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित ५ जना मन्त्रीद्वारा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख गीताकुमारी पौडेलले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगै अन्य ४ जना मन्त्रीलाई पनि शनिबार साँझ सपथ ग्रहण गराएकी हुन् । मन्त्रीमा काँग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले सपथ लिएका हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यही […]
June 12, 2021 June 12, 2021 N88LeaveaComment on गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि आधार पेश गर्न आहृवान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पोखरेलले ३१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए । अब उनले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत […]
बीबीसी । नेपाली सेनाले आगामी साउन १ गतेबाट लागु गर्ने नयाँ कमान्ड संरचनाले दुई दशकदेखि कायम रहेको क्षेत्रीय स्तरको पृतनाको संरचनालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। नयाँ संरचना अन्तर्गत नेपाली सेनामा सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डा मातहत चारवटा कमान्ड संरचनाहरू हुनेछन्। नदी घाँटी प्रणालीका आधारमा तय गरिएका भनिएका ती कमान्ड अन्तर्गत पूर्वमा कोशी नदीलाई […]
काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पोखरामा पनि ओली भाइरस सल्केको टिप्पणी गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पुन: मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘ओली भाइरस पोखरामा पनि सल्केको’ टिप्पणी गरेका हुन्। यो महामारीले देशको संविधान र लोकतन्त्रलाई सिध्याउने भयो भन्दै उनले त्यसको प्रतिवादमा एकजुट हुन अपिल गरेका छन्। […]
June 12, 2021 N88LeaveaComment on पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नागार्जुन दरवार पनि छाडे ! किन छाडे ?
सीताराम बराल गाडी चढ्नुअघि पूर्व बडामहारानी कोमल एकाएक भावुक बनिन्। उनका आँखाबाट आँसु झरे। पति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्झाए, मुटु बलियो पार्न भने। पति ज्ञानेन्द्रले सम्झाएपछि १३ वर्षअघि (२९ जेठ २०६५) को साँझ नारायणहिटी राजदरबारबाट बाहिर निस्कँदा पूर्व बडामहारानी कोमलको अनुहारमा सन्ताप देखिँदैनथ्यो। आफ्नै पालामा राजतन्त्रको अन्त्य हुँदा बेदना त कति थिए होलान् कति। […]
बुढीलाई मन्त्री बनाउँदा बादल पूर्वमाओवादी समूहभित्रैबाट एक्लिए
June 12, 2021 N88LeaveaComment on बुढीलाई मन्त्री बनाउँदा बादल पूर्वमाओवादी समूहभित्रैबाट एक्लिए
काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल पूर्वमाओवादी समूहभित्रैबाट एक्लिएका छन्। पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले श्रीमती नैनकला थापासहित, दुई जनालाई मन्त्री बनाउन ओलीलाई सहमति दिँदा उनले आफ्नो समूहसँग कुनै सल्लाह गरेनन्। २७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरे। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादी समूहका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा ओलीले आफ्नो अप्ठ्याराहरुबारे जानकारी […]
June 12, 2021 N88LeaveaComment on उच्च मनोबलका साथ दायित्व पूरा गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडाैं । गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले समाज र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने नेपाल प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ दायित्व पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको आज निरीक्षण भ्रमणपछि आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले परिस्थितिको सामना गर्ने क्रममा राष्ट्रलाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्न पनि निर्देशन दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने क्रममा प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण […]
लण्डनको चर्चित रियालिटी शो ‘सिक्रेट क्रस’ मा नेपाली अनिता लिम्बू
June 12, 2021 N88LeaveaComment on लण्डनको चर्चित रियालिटी शो ‘सिक्रेट क्रस’ मा नेपाली अनिता लिम्बू
लन्डनको बहुचर्चित ‘आई टिभी टू’ च्यानलबाट प्रशारण हुने रियालिटी शो ‘सिक्रेट क्रस’ नेपाली मोडल अनिता लिम्बूले सहभागिता जनाएर धेरैको मन जित्न सफल भएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको प्रतिभा देखेर आयोजक टिमले नै उनलाई रियालिटी शो मा भाग लिन आग्रह गरेको थियो । आयोजकको आग्रहअनुसार उनले शो को अडिसनमा सहभागी हुँदै कार्यक्रममा भाग लिएकी थिइन् […]
June 12, 2021 N88LeaveaComment on बन्द भए टेलिशृङ्खला ‘सक्किगो नि’ र ‘हर्के’ हल्दार
कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण गत एक महिनादेखि देशमा निषेधाज्ञा जारी छ । निषेधाज्ञाले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । निषेधाज्ञाकै कारण मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिमा ब्रेक लागेको छ । निषेधाज्ञाको असर टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेका लोकप्रिय टेलिशृङ्खलाहरूमा समेत परेको छ । नियमित प्रसारण हुँदै आएका धेरै टेलिशृङ्खला अहिले बन्द भएका छन् । केहीका भने स्टक सकिन लागेकाले […]